के गोपनीयताका लागि ‘कुकिज’ खतरा हुन्छ ? - Tech News Nepal Tech News Nepal
शनिबार, फाल्गुन ८, २०७७ ०९:५५
के गोपनीयताका लागि ‘कुकिज’ खतरा हुन्छ ?
तपाईंले कति ठाउँमा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्नु भएको छ, कति ठाउँमा संवेदनशील युजर लगईन । यी सबै कुरा कुकिजले चोर्दछ । यो अमेजनको डेडिकेटेड कुकिज जस्तो सामान्य हुँदैन ।